"Voltaren" (amakhandlela) - ukulungiselela ngempumelelo equkethe imvelaphi izingxenye ze-non-steroidal anti-inflammatory, ikakhulukazi i-sodium diclofenac. Lesi sidakamizwa ngokuvamile sisetshenziswa imithi okudambisa ubuhlungu, ukuvuvukala.
"Voltaren" (ikhandlela): izici kwemithi zomuthi
Njengoba sekushiwo, lapho i-ejenti main asebenzayo zomuthi - ke dikofenak. ukusebenza yayo ukuvuvukala ngenxa ithonya phezu zamagama kanye exchange of prostaglandins, okuyinto abahileleke ngokuqondile kumiswa umthombo ukuvuvukala.
Umuthi ngokushesha ngempela ugxile odongeni emathunjini, emakamu esiphezulu egazini kufinyelelwe ku cishe ihora ngemva ukusetshenziswa. Diclofenac umzimba emisipheni isibindi. Cishe amaphesenti angu-60 metabolites ethathwe komzimba womuntu emchamweni, ingxenye kanye indle.
"Voltaren" (ikhandlela): izinkomba ukusetshenziswa
Ithuluzi esetshenziselwa ubuhlungu nokuvuvukala. Amakhandlela Bheka kukhona newusizo kakhulu izifo amalunga omzimba. Ngokwesibonelo, bafake iziguli Voltaren abanesifo sokuqaqamba kwamalunga (kuhlanganise engamahlongandlebe samathambo), sifo, i-osteoarthritis, njll Kuyinto izifo ngempumelelo nomgogodla, okuyinto ahambisana emizweni ubuhlungu emuva okhalweni.
Ngakolunye uhlangothi, leli thuluzi Kunconywa ukukhululeka ubuhlungu ngenxa yokulimala kanye umonakalo, kanye ukuqeda ukuvuvukala kanye nezinkinga esikhathini postoperative. Amakhandlela ziyasebenza ngoba ubuhlungu bekhanda elivamile noma elingapheli eyinsakavukela. Wasebenzisa izidakamizwa njengengxenye ekwelapheni neuralgia Lokudabuka ezahlukene.
"Voltaren" (ikhandlela): yokusetshenziswa
Umthamo umuthi namaphesenti imodi reception unelungelo ukunquma udokotela, esekelwe ngezimo zesiguli, amafomu kanye izigaba zesifo, ubudala, njll Nokho, inani yansuku zonke izidakamizwa kumele singeqi mg 150 (owodwa suppository iqukethe 50 mg diclofenac).
Suppository kuyadingeka ukuze singene ingquza abese elala phansi okungenani isigamu sehora. Kubalulekile kakhulu ukuba esimweni enezingqimba, ukuqikelela ukuthi ukuhambisa ngenkuthalo - ke kuyothuthuka ukumuncwa zomuthi. Ephambi kwezinduna imifantu hemorrhoids noma bendunu ndima amakhandlela is hhayi Kunconywa ukusebenzisa - bangathumela esikhundleni imijovo noma amaphilisi, lapho imithi iyatholakala.
"Voltaren" (ikhandlela): Izimo
Njenganoma yimuphi neminye imithi, "Voltaren" anezinye Izimo. Ngokwesibonelo, izidakamizwa kungavunyelwe ukuthatha abantu hypersensitivity emuthini. By endleleni, uma une-yokungezwani komzimba ukuze analgin, idatha Futhi kusho ukuthi akufanele usebenzise.
Prima sinqatshiwe izidakamizwa ngesikhathi wokugaya ukudla izifo ipheshana ezifana isilonda, nesifo, hemorrhoids, isifo Crohn. Asincomi balithathe ephula igazi, uhlelo urinary, inhliziyo futhi isibindi.
Ungasebenzisi suppositories ezinyangeni okugcina enkathi yokukhulelwa, njengoba lokhu kungaholela ukwephula inqubo ejwayelekile. Ezinyangeni zokuqala yokufeza umuthi ingane iqondiswa ngemithamo emincane kakhulu futhi kuphela ezimweni ezimbi kakhulu. Lokhu imithi ayivunyelwe ukwamukela izingane ezingaphansi kweminyaka eyisithupha.
Nakuba ohlangothini ukusabela azisenzeki kaningi kakhulu, ukuphatha njalo izidakamizwa kungadala ubuthakathaka, isiyezi, ukuhlanza, ukukhishwa isisu, ukubuyisa, stomatitis, gingivitis, Zinciphisa isifiso. Izimo zethu zihluke kakhulu ezingavamile okuvela sokusha kwesibindi noma ukopha emathunjini. Ngezinye izikhathi kungenzeka ukuthuthukisa yokungezwani komzimba esibonakaliswa amawala, ububomvu kanye ukulunywa.
"Voltaren" (ikhandlela): umthengi Izibuyekezo
Iziguli ukuphuza umuthi, bethi siwumsebenzi ngokushesha ngempela aqede ubuhlungu nokuvuvuka amalunga. Kukhona izincomo eyodwa kuphela. Ngosuku lokuqala ukwelashwa okungcono kakhulu ukuhlala ekhaya uzitholele engemihle. Ngokwesibonelo, uma diclofenac imbangela isiyezi kanye angaboni kahle, bese beshayela ngesikhathi sokwelashwa kungcono hhayi ukuhlala phansi.
Ukulungiselela "Isosorbide dinitrate" - lokuthola usizo oluyilo ezinkantolo eliphumelelayo angina
Herb centaury - eziwusizo futhi iyatholakala
"Luminal": imiyalelo ukusetshenziswa olusanda kuzalwa
Izidakamizwa "Cystone." Yokusetshenziswa
Oilcloth iraba-Plain Medical: aphoyintimenti, ukusebenza izici, izinzuzo
Tablets izikelemu kubantu: Phezulu imithi eminye esebenza ngempumelelo kakhulu
Kanjani ukuze ibe namandla? Amacebo eziwusizo
Medicine "gioksizon wamafutha"
Modern Amahhotela Hellas
Mortiser ukhuni ngezandla zabo: imidwebo, imiyalelo inhlangano
Yakha amandla ommeli ngokushayela
Ukubhula Iqiniso emabalazweni elula
Drilling Rig URB 2A2: ezibekiweko lobuchwepheshe
Ikheli Allergotsentr Saratov, ukubuyekezwa, kanjani ukuze uthole